Rabshado ka dhacay Rinkeby (updated) | Somaliska
Rabshado ayaa ka dhacay xaafada soomaalidu u badan tahay ee rinkeby xalay markii ilaa 60 dhalinyaro ah la sheegay in ay ku tuureen dhagxaan booliiska ayagoo sidoo kale dab qabadsiiyay guryo. "Waa goob dagaal halkaan, waxaa da'aya roob dhagxaan ah" ayuu yiri goobjooge. Sida joobjooge kale uu sheegay, bas isku dayay xaafada in uu galo ayaa loo diiday "daaqadaha baska waa la burburiyay" ayuu yiri goobjoogaha. Booliiska ayaa akhbaarta in dhibaato soo socoto dareemay markii ay dhalinyaro ku soo aruureen wadooyinka ayagoo wata dhagxaan. "Waxkasta ayay sameeyeen si ay indhaha dadka u soo jiitaan" ayuu yiri Mats Brännlund oo ka mid ah booliiska Stockholm. Booliiska ayaa u furay wadada gaadiidka adeega deg dega ah markii guri dab la qabad siiyay. Raysal wasaaraha Iswiidhan Fredrik Reinfeldt ayaa ku baaqay in la xakameeyo rabashadaha isagoo sheegay in dhacdooyinkaan ay muujinayaan in bulshada aysan qofkasta u shaqeynayn isagoo sheegay in loo baahanyahay waalidiintu in ay la hadlaan ilmahooda oo xaalada la dajiyo. Sidoo kale wiil 20 jir ah ayaa xabsiga la dhigay iyadoo booliisku sheegeen in ay baarayaan kaamirooyinka wax duuba si ay u soo qabtaan dad dheeri ah.
Xigasho - The Local
Rabshado ka dhacay Rinkeby (updated)
Rabshado ayaa ka dhacay xaafada soomaalidu u badan tahay ee rinkeby xalay markii ilaa 60 dhalinyaro ah la sheegay in ay ku tuureen dhagxaan booliiska ayagoo sidoo kale dab qabadsiiyay guryo.
“Waa goob dagaal halkaan, waxaa da’aya roob dhagxaan ah” ayuu yiri goobjooge.
Sida joobjooge kale uu sheegay, bas isku dayay xaafada in uu galo ayaa loo diiday
“daaqadaha baska waa la burburiyay” ayuu yiri goobjoogaha.
Booliiska ayaa akhbaarta in dhibaato soo socoto dareemay markii ay dhalinyaro ku soo aruureen wadooyinka ayagoo wata dhagxaan.
“Waxkasta ayay sameeyeen si ay indhaha dadka u soo jiitaan” ayuu yiri Mats Brännlund oo ka mid ah booliiska Stockholm.
Booliiska ayaa u furay wadada gaadiidka adeega deg dega ah markii guri dab la qabad siiyay.
Raysal wasaaraha Iswiidhan Fredrik Reinfeldt ayaa ku baaqay in la xakameeyo rabashadaha isagoo sheegay in dhacdooyinkaan ay muujinayaan in bulshada aysan qofkasta u shaqeynayn isagoo sheegay in loo baahanyahay waalidiintu in ay la hadlaan ilmahooda oo xaalada la dajiyo.
Sidoo kale wiil 20 jir ah ayaa xabsiga la dhigay iyadoo booliisku sheegeen in ay baarayaan kaamirooyinka wax duuba si ay u soo qabtaan dad dheeri ah.
Xigasho – The Local
Qaramada Midoobay (UN) oo ku talisay in la cuno cayayaanka si loola dagaallamo gaajada iyo cunto la’aanta ku sii kordhaysa adduunka
Sidee ayay kamuunada Sweden isugu diyaarinayaan Soomaalida imaanaysa?
3 Maalin ayaa ka hartay doorashada, xagee maraysaa taageerada xisbiyada?